Ny toetra mampiavaka azy sy ny fiasan'ny paompy hafanana hafanana | Fanavaozana maintso
Tao amin'ny lahatsoratra teo aloha dia niresaka momba izany isika fanafanana geothermal. Tao anatin'izany dia niresaka momba ny iray amin'ireo singa ilaina hampiasa ity karazana fanafanana ity izahay paompy hafanana hafanana. Ny fiasany dia mitovy amin'ny an'ny paompy hafanana mahazatra. Na izany aza, ny angovo hafanana ampiasainy dia alaina amin'ny tany.
Te hahafantatra amin'ny fomba lalina ny fandidiana sy ny toetran'ny paompim-panafanana ianao? Ity fampahalalana ity dia mety ho tena ilaina raha toa ka hametraka fanafanana ao an-tranonao ianao 🙂
1 Paompy hafanana hafanana
3 Fomba fitrandrahana angovo geothermal
4 Paompy hafanana miorina sy mitsivalana
5 Fampiasam-bola ara-toekarena voalohany
Mba hamelomana kely ireo hevitra sy hampiasana tsara ny sisa amin'ny lahatsoratra dia hodinihintsika ny famaritana ny fanafanana geothermal. Izy io dia rafitra manafana izay ampiasantsika rano mafana hanafanana ny atin'ny tranobe. Avy amin'ny vato na rano anaty rano izany hafanana izany ary afaka mihodina milina mpamokatra herinaratra. Hevitra izany, noho izany ao anatin'ny sehatry ny angovo geothermal.
Ny paompy hafanana hafanana dia afaka mandeha amin'ny toerana rehetra. Ity fampiasana ity dia niely nanerana ny fiaraha-monina, hatramin'ny ambaratonga izay mitombo 20% isan-taona izany. Rehefa mikasika ny fantsom-baravarana ao ambadiky ny vata fampangatsiahana isika, dia hitantsika fa ny hafanana dia alaina avy ao anaty ny fitaovana ary manaparitaka izany amin'ny ambin'ny lakozia. Miasa amin'ny fomba mitovy amin'izany ny paompy hafanana, fa ny mifamadika. Izy io dia mahay mandray ny hafanana any ivelany ary mamoaka azy ao anatiny. Toy ny hoe manandrana mangatsiaka ny any ivelany ianao.
Na ao anaty vata fampangatsiahana na ao anaty paompy misy hafanana dia misy fantsona mivezivezy tsiranoka anaty vata fampangatsiahana. Ity tsiranoka ity dia afaka manafana rehefa tery sy mangatsiaka rehefa mivelatra. Raha te-hanafana ny trano isika mba hijanona tsara amin'ny ririnina, ny tsiranoka mafana izay voafehy dia hivezivezy amin'ny alàlan'ny exchanger hafanana izay manafana ny rivotra mamelona rafitra fitondra.
Azonao atao ny milaza fa ny "fluid" dia efa "ampiasaina". Aorian'izany dia milamindamina izy ary mivelatra, mifandray amin'ny loharano geothermal izay "mameno" azy amin'ny hafanana. Ity dingana ity dia averimberina hatrany hatrany noho ny hafanana maharitra.
Ny zavatra iray tsy tokony ho adino dia ny famonoana ny tsiranoka dia mila herinaratra. Ny paompy hafanana geothermal dia mahomby kokoa noho ny paompy hafa na ny fanamorana hafanana hafa. Ireo rafitra misy ankehitriny Izy ireo dia afaka mamokatra hafanana hatramin'ny 4 kW isaky ny herinaratra kW vokarina. Izany dia mahatonga azy ireo hahomby tokoa, satria tsy mila mamorona hafanana izy ireo, fa manaisotra azy avy any ambanin'ny tany.
Mifanohitra amin'izany no misy, tsy ny paompy ihany no manafana ny trano. Azonao atao ihany koa ny mangatsiaka ny trano mba ho milay amin'ny fahavaratra. Ireo paompy ireo dia antsoina hoe paompy hafanana miova. Amin'ity tranga ity, ny valva iray dia iray izay mifehy ny làlan'ny tsiranoka. Noho izany, ny hafanana dia afaka mivezivezy amin'ny lafiny roa.
Fomba fitrandrahana angovo geothermal
Betsaka ny olona mampiasa an'io karazana fanafanana io no efa mahalala ny paompy hafanana hafanana. Ny tombony lehibe dia ny fampiasana ny rivotra avy any ivelany hanafana ny trano. Ny hafanan'ny tany dia tsy manam-petra, noho izany io dia heverina ho karazana angovo azo havaozina. Afaka manana hafanana ianao isaky ny mila izany ary amin'ny fomba tena milay sy mora. Ho fanampin'izany, hanampy amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana ianao ary hampihena ny entona entona entona mankany amin'ny atmosfera. Amin'izany fomba izany dia hampihena ny voka-dratsin'ny fiovan'ny toetr'andro sy ny fiakaran'ny maripana.
Ny iray amin'ireo fihemorana amin'ny paompy hafanana mahazatra dia ny fihenan'ny fahombiazan'izy ireo rehefa mangatsiaka be ny hafanana ivelany. Midika izany fa rehefa tena ilain'ny hafanana bebe kokoa ny hafanana ao an-trano dia tsy dia mahomby ny paompy. Na izany aza, tsy mitranga amin'ny paompy hafanana hafanana io, satria mamoaka hafanana avy any afovoan'ny tany izy. Ny tany dia milamina ny hafanana ary ny hafanana dia miova na dia mangatsiaka kokoa aza ny any ivelany. Noho izany, tsy hahavery ny fahombiazany amin'ny fotoana rehetra.
Paompy hafanana miorina sy mitsivalana
Ny fomba malaza indrindra hamoahana ny hafanana dia ny paompy hafanana geothermal mitsangana. Matetika napetraka 150 ka hatramin'ny 200 metatra ambanin'ny tany izy io. Napetraka manodidina ny lava-bato nolavahana ambanin'ny tany ny paipa. Ny rano dia mivezivezy amin'ny alalàn'izy ireo miaraka amin'ny tsiranoka antifreeze izay afaka mampiakatra ny hafanana hampihena ny rano mangatsiaka.
Ny safidy hafa dia ny paompy hafanana geothermal marindrano. Amin'ity tranga ity dia feno rano ny fantsona ary halevina eo amin'ny 6 metatra eo ambanin'ny tany izy. Izy ireo dia rafitra izay mitaky fanitarana lehibe hahafahana mamorona hafanana sahaza hanafanana tranobe antonony. Na izany aza, ny vidiny dia ambany lavitra noho ny paompy mitsangana.
Betsaka ny olona no misalasala ny amin'ny fahombiazany amin'ireo faritra akaikin'ny loharano voajanahary toy ny farihy, renirano ary dobo. Tsy toa izao. Ny paompy hafanana geothermal dia mahomby eo akaikin'ireny toerana ireny ihany satria azonao ampiasaina ho loharanom-pahavaratra ivelany.
Ny fifanakalozana hafanana miaraka amin'ny tany ivelany dia tanterahina amin'ny alàlan'ny mpanangona hetra iray, izay mety misy karazany roa: mpanangona geothermal mitsangana sy marindrano. Amin'ny tranga voalohany, misy fantsom-pandrosoana (2 na 4) apetraka ao anaty perforation iray mankany 50-100 m ny halaliny ary 110-140 mm ny savaivony. Amin'ny tranga faharoa, tambajotra marindrano amin'ny fantsona dia apetraka 1,2-1,5 m lalina.
Fampiasam-bola ara-toekarena voalohany
Ny sakana lehibe izay manakana ny fampiasana ny angovo azo havaozina dia ny fampiasam-bola ara-toekarena voalohany. Toy ny amin'ny sehatra maro dia ilaina ny mampiasa vola amin'ny voalohany ary avy eo ampanjifaina arakaraky ny fotoana. Ny vidiny voalohany amin'ny fanafanana geothermal dia mihoatra ny an'ny rafitra fanafana nentin-drazana.
Raha natao hananganana ny tranon'ny fianakaviana dia mety mitentina 6.000 ka hatramin'ny 13.000 euro. Tsy misy dikany izany ho an'ireo olona rehetra izay tsy mahazo karama lehibe ho azy ireo amin'ny asany. Amin'izany vola izany dia afaka mividy fiara ianao! Na izany aza, ny paompy hafanana hafanana dia mahasoa amin'ny fotoana maharitra. Avelany hampihena ny fandaniana ny volavolan-dalàna momba ny angovo eo anelanelan'ny 30 sy 70% amin'ny tranga fanafanana ary 20-50% amin'ny fampangatsiahana.
Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity dia vonona ny hampiasa ity karazana fanafanana ity ianao ary hanomboka hitahiry izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo geothermal » Paompy hafanana hafanana
Toeram-pitrandrahana nokleary Cofrentes
Ireo foibe famokarana herinaratra 10 malaza indrindra any Espana